Ilhaan Cumar oo ka shaqeyneysa hindise sharciyeed u daneynaya Soomaaliya -
[ July 15, 2019 ] Madaxweynaha Hirshabelle Oo Gaaray Magaalada Dhuusa Mareeb	Wararka
[ July 15, 2019 ] Dhul-Gariir Ka Dhacay Duleedka Degmo Ku Taalla Waqooyiga Soomaaliya	Wararka
[ July 15, 2019 ] Mamulka Jubbaland: Amniga Wax Gor-gortan Ah Lagama Gelayo	Wararka
[ July 15, 2019 ] R/wasaaraha Dalka Canada oo ka hadlay dilkii Hodan Naaleeye	Wararka
[ July 15, 2019 ] Madaxweynaha Hirshabelle Oo Safar Ku Tagayo Magalada Dhuusamareeb	Wararka
HomeWararkaIlhaan Cumar oo ka shaqeyneysa hindise sharciyeed u daneynaya Soomaaliya
Ilhaan Cumar oo ka shaqeyneysa hindise sharciyeed u daneynaya Soomaaliya
April 11, 2019 F.G Wararka 0
lhan Cumar ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacada ah ay aqalka wakiillada ee Koongareeska hor geyso hindise sharciyeed ay ku doonayso inay ku afjarto waxa ay ku tilmaamtay “Islaam nacaybka” madaxweyne Trump.
“Waxaan ballanqaadayaa inaan gabagabeeyo Islaam nacayb Trump iyo mamnuucidda Muslimiinta”, ayey barteeda Twitter-ka ku qortay Ilhan maalintii Talaadada ahayd.
“Ma’ahan in la dafiro xuquuqda aasaasiga ah ee dadka iyagoo loo sababeynayo diintooda, jinsiyaddooda ama dalka ay kasoo jeedaan.”
Madaxweyne Trump ayaa horay boggiisa Tweetarka ku qoray ‘hadal jeejees ah’ oo uu ula jeedo Ilhaan Cumar.
Warbixintan oo aan ka soo xigannay wargeyska Daily Mail ayaa sheegeysa inuu Madaxweyne Donald Trump oo ka hadlayay kulan ay lahaayeen Kooxda Hoggaamisa siyaasadda Yuhuudda ee ku dhaqan Mareykanka uu raalligaliyay Ilhaan Cumar, isaga oo ku jeesjeesaya.
Inta uusan khudbaddiisa billaabin ka hor ayuu yiri ‘Oh waan ilaaway illeen Ilhaan Cumar Israa’iil ma jecleyn, waan ka xumahay. Maya Israa’iil iyadu ma jecla, miyey jeceshahay? Fadlan waan ka raalli gelinayaa.
Wuxuu sidoo kale Xisbiga Dimuqraadiga ku eedeeyey inuu oggolaado in Yuhuud Neceybka ay xisbigooda ku xidideysato.
Madaxwayne Trump ayaa xayiraad horay ugu soo rogay 8 dal oo ah dalal Muslimiin ah.
Mamnuucidda ayaa ka danbeeysay dib u eegis lagu sameeyay xaaladda ammaanka iyo amar uu horey u soo rogay oo waqtigiisa uu imika dhacayo.
Mr Trump ayaa sheegay in mudnaanta uu siinayo in Maraykanka uu noqdo dal amaan ah.
Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in xeerarkan ay bartilmaamed ku yihiin dalal gaar ah.
Sidoo kale Maraykanka ayaa wadamada Suuriya iyo wuqooyiga Kuuriya ku soo rogay mamnuucid buuxda halka Venezuela ay mamnuucida ku xaddidan tahay saraakiil ka tirsan dowlada iyo qoysaskooda.
Haddii Ilhaan Cumar ay ku guuleysato ol’olahan cusub ee ay sheegtay inay billaabeyso, waxaa suurta gal ah inay dan u noqoto dad Soomaaliya kasoo jeeda oo Mareykanka laga hor istaagay, maadaama ay Soomaaliya ku jirto dalalka Muslimiinta ah ee muwaadiniintooda aan loo oggoleyn inay galaan Mareykanka.
Dad badan oo qaxooti ah iyo kuwo ay qoysaskooda u dacwoonayaan ayaa in muddo ah u xanniban xayiraadda uu Trump kusoo rogay awgeed.